Vimeo မှဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် Gadget သတင်း
မင်းကို YouTube အကြောင်းပြောရင်မင်းစဉ်းစားစရာမရှိဘဲဂူးဂဲလ်ရဲ့ streaming ဗီဒီယိုပလက်ဖောင်းအကြောင်းအချက်အလက်များစွာကိုသတိရတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်သင်တို့ကိုအကြောင်းပြောလျှင် Vimeo? သငျသညျသေချာသေချာအောင်သူမ၏သိကြပါဘူး။ ကောင်းပြီ၊ ၄ င်းသည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်ကတည်းကကွန်ယက်တွင်ရောက်ရှိခဲ့ပြီး၎င်းထက်မကသော၊ Youtube ၏တိုက်ရိုက်ပြိုင်ဘက်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အခြားအသုံးပြုသူများမှတင်ထားသောအကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုနိုင်သည့်အပြင်အခြားသူများကြည့်ရှုရန်အတွက်သင်ကိုယ်တိုင်ပင် upload ပြုလုပ်နိုင်သည့်နောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ အရမ်းကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်surelyကန်စင်စစ်ယခုအချိန်တွင်သင်စဉ်းစားနေသည် Vimeo မှဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်း သင့်ကွန်ပျူတာသို့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမကြည့်ရအောင်၊ မင်း YouTube အကြောင်းလည်းအကြိမ်ကြိမ်စဉ်းစားဖူးတယ်၊ ဒါကြောင့်လည်း Actualidad Gadget မှာ ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာမင်းတို့ကိုမင်းတို့ပြောပြီးပြီ Google ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာ။ ဒါပေမယ့်ဗွီဒီယိုတွေကိုသူတို့ရဲ့ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကနေဘယ်လိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာသိချင်ရင် ဒီရိုးရှင်းတဲ့သင်ခန်းစာကိုလက်လွတ်မသွားပါစေနဲ့ကောင်းပြီ၊ ဖတ်ပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်သင့်ဆားသည်တန်ဖိုးရှိသည့်မည်သည့်ဗွီဒီယိုကိုမဆိုကူးယူရန်အဆင့်အားလုံးပါလိမ့်မည်။
1 Chrome အတွက် Videodownloader
Chrome အတွက် Videodownloader
အကယ်၍ သင်သည်ဂူဂဲလ်ဘရောင်ဇာကိုသုံးလျှင်၊ ပထမနည်းလမ်းသည်သင့်ကိုများစွာစိတ်ဝင်စားသည်။ ဗီဒီယိုဒေါင်းလုပ်ချသည် သင် Chrome တွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်ကို extension ကို, ၎င်းသည်သင့်အား YouTube မှမဟုတ်သော်လည်းစာမျက်နှာများစွာမှဗီဒီယိုများကူးယူရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်းသည် Vimeo ဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်ချရန်ခွင့်ပြုသဖြင့်၎င်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကြည့်ကြစို့။ ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်လိမ့်မည် extension ကို download လုပ်ပါ ဗွီဒီယို Google Chrome မှာ ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်လိုသောဗွီဒီယိုကို ၀ င်ရောက်ပြီး၊ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်၌၊ အပြာရောင်မြှားနေသမျှကာလပတ်လုံးဗီဒီယိုထောက်ခံအဖြစ်။
“ မြှား” ကိုနှိပ်ပါ ရရှိနိုင် download option များနှင့်အတူ menu ကို ဗီဒီယိုအတွက် အပေါ်မျက်နှာပြင်အထက်ပုံတွင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစိတ် ၀ င်စားစေမည့်အရာတစ်ခုကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်တစ်ခုချင်းစီ၏အရွယ်အစားကိုပြသထားသောကွဲပြားသောဗီဒီယိုအရည်အသွေးများကိုခွင့်ပြုသည်။ ပြီးတာနဲ့ကျနော်တို့ကိုကလစ်နှိပ်ပါ ဒေါင်းလုပ်, ဒေါင်းလုပ်သည်အလိုအလျောက်စတင်လိမ့်မည်။ လွယ်ပါတယ်၊
ဤကိစ္စတွင် VimeotoMP3 သည်ဘာမှမဟုတ်ပါ က်ဘ်ဆိုက် ဒါကကျွန်တော်တို့ကို Vimeo ကနေကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဗွီဒီယိုတွေကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပေးလိမ့်မယ် သူ interface ရိုးရှင်းပြီးရှင်းပါတယ်ဝက်ဘ်ရှိသည့်အကောင့်ကိုကျွန်ုပ်တို့ယူရန်လိုသည် လူသိရှင်ကြားတွေအများကြီး နှင့်အချို့ကိစ္စများတွင်၎င်းသည်အတားအဆီးအနည်းငယ်သာရှိသောကြောင့်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုမှတစ်ခုကိုသင်ရွေးချယ်လိုပေမည်။
၎င်း၏စစ်ဆင်ရေးအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ကျနော်တို့သာ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ဝင်ရောက်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ် VimeotoMP3 y စာသားဘားသို့ URL ကိုကူးယူပါ သို့မဟုတ်သင် download လုပ်လိုသောဗီဒီယို၏လင့်ခ်ကိုနှိပ်ပါ။ ဒီပြီးနောက်ရုံဘားကိုအောက်တွင်ကျနော်တို့တစ်စီးရီးရှိသည် ရွေးချယ်မှုများဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်း MP3, ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန် MP4အတူတူလုပ်ပါ HDစသည်တို့ URL ကိုကူးယူပြီးတာနဲ့ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်ချက်နှင့်အကိုက်ညီဆုံးသော option ကိုနှိပ်ပါ download သည်အလိုအလျောက်စတင်လိမ့်မည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ပစ္စည်းပေါ်မှာ။
ယခင်ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုသည် Vimeo ဗွီဒီယိုများကိုသင်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်သောဝက်ဘ်ဆိုက်များအကြောင်းဖြစ်သော်လည်းဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့တစ်ခုအကြောင်းပြောမည်ဖြစ်သည် Windows သို့မဟုတ် Mac အတွက် application။ အလေးချိန်က ၂၇ MB ထက်ပိုပါတယ် ပေါ့ပါးပြီးနေရာမယူနိုင်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ hard drive ပေါ်မှာ။ ကျနော်တို့ရုံရန်ရှိသည် သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ နှင့်ပြောသောအစိမ်းရောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ 4K Video Downloader ကိုရယူပါ.
ပြီးတာနဲ့ပြီးနောက်, ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး install လုပ် url ကူးယူပါ Vimeo မှကူးယူလိုသောဗီဒီယို၏ link သို့မဟုတ် application သည်၎င်းကိုချက်ချင်းသိရှိပြီး၎င်းကိုစတင် download ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ မရရှိလျှင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်သည် add သင်္ကေတပါသောအစိမ်းရောင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ, ကျွန်တော်တို့ကို link ကိုကိုယ်တိုင်ကိုကိုယ်တိုင်ကူးယူရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ program ကူးယူပြီးတာနဲ့ ဘယ်ပုံစံနဲ့ဘယ်လိုချင်သလဲဆိုတာကိုမေးလိမ့်မယ် ပေါ်ပေါက်ဖို့ download လုပ်ပါ။ ဤရှုထောင့်များကိုရွေးချယ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်ပြီးစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းကျွန်ုပ်တို့၏ download ဖိုင်တွဲ၌၎င်းကိုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Catchvideo ကဗီဒီယိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သိနှင့်ပြီးသားအချက်တစ်ချက်ကိုထပ်မံပြောပြသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်ထားသောအရည်အသွေးကိုဒေါင်းလုပ်ချရန်ခွင့်ပြုရုံသာမက၎င်းသည်လည်းပါ ၀ င်သည် ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဗီဒီယိုကိုအင်တာနက်ရဲ့အရှည်နဲ့အနံကိုရှာဖွေမှာပါ ကွဲပြားခြားနားသောအရည်အသွေးများရှိခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သောအရင်းအမြစ်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ကျနော်တို့ရုံရန်ရှိသည် သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါတစ်ချိန်ကရှိ ဗီဒီယို link ကိုကူးယူ ငါတို့ရှာဖွေရေးဘားတွင် download လုပ်ချင်သော။ ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် ဖမ်း, ဒေါင်းလုပ်ရွေးချယ်စရာများစာရင်းတစ်ခုစီသည်သက်ဆိုင်ရာ link နှင့် video အရည်အသွေးတို့ပါ ၀ င်လိမ့်မည်။ link ကို click ပြီးတာနဲ့ download သည်အလိုအလျောက်စတင်သည်။
မင်းမြင်တဲ့အတိုင်း Vimeo မှဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်ချခြင်းသည်မဖြစ်နိုင်သည့်အလုပ်မဟုတ်ပါသင်ရုံရန်ရှိသည် အကောင်းဆုံးနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ tool ကိုရှာပါ သင်၏လိုအပ်ချက်များကိုအမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်းပါ၊ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲဒေသတွင်း၌သင်၏စက်ကိရိယာပေါ်တွင်သင်၏ဗီဒီယိုများကိုခံစားရန်ဤရိုးရှင်းသောသင်ခန်းစာကိုလိုက်နာပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » ယေဘုယျ » Vimeo မှဗွီဒီယိုများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်နည်း
Windows 10 လိုင်စင်ကိုယူရို ၁၀.၃၉ ကနေဘယ်လိုရနိုင်မလဲ
စွမ်းအင်စနစ်သည် Alexa နှင့်အတူစပီကာအသစ်များကိုတရားဝင်တင်ဆက်ခဲ့သည်